Thu, Jun 4, 2020 at 7:56pm
असार ३, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगामले दिल्लीमा दैनिक तीन उठान भर्ने भएको छ । दिल्ली स्थित इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन पटक उडान गर्ने भएको हो । निगमका अनुसार अहिले दैनिक दुई उडान भइरहेको छ उडानमा निगमका न्यारोबडी ए ३२०–२०० र ७ उडान वाइडबडी ए ३३०–२०० द्धार दिल्ली उडान भइरहेको छ । निगमले छिट्टै एक उडान थप गरी तीन उडानमा पुर्याउने बताएको छ भने..
काठमाडौं, असार ३ । नेपालको पहिलो भू–उपग्रह अर्थात नेपाली स्याटेलाइटले पृथ्विीको कक्ष परिक्रमा गर्न थालेको छ । पहिलो भू–उपग्रह ‘नेपाली स्याट–१’ पृथ्वीको कक्षमा छाडिएको सोमबार चार बजेर १९ मिनेटमा पृथ्वी कक्षमा छाडिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नास्टको टोलीसहित जापान पुगेर जाक्साबाट ‘गो’ भनेपछि अन्तरिक्षमा रहेको नेपाली झन्डासहितको स्याटेलाइटले पृथ्वीको परिक्रमा लगाउन सुरु गरेको थियो । नेपाल सहित श्रीलंकाको रावना–१..
काठमाडौं, ३ असार । चौधरी गु्रप टेलिकम (सिजी)ले देशभर मोबाइल सेवा दिन सम्पुर्ण कार्य पुरा भएपनि मोबाइल सेवा अनुमति पत्र फाइल भने सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमै रोकिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको बिषयमा तीन महिना अगागिनै मन्त्रालयको जवाफ मागीसकेको थियो । तर मन्त्रालयमा पुगेको सिजी मोबाइल सेवा लाइसेन्सको फाइल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमै अड्किएको छ । सिजीले लामो समय देखि देशभर फोरजी..
काठमाडौँ, २ असार नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ लाई आज अपराह्न ४ बजे स्वतन्त्र रुपमा आकाशमा छाडिएको छ । जापानस्थित क्युटेक विश्वविद्यालयले अघि बढाएको ‘वर्ड–३’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालका लागि उक्त भूउपग्रह गत वैशाख ४ गते परीक्षणका रुपमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । डेढ महीनाअघि देखि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भूूउपग्रहले आजबाट पृथ्वीको कक्षमा आई आकाशबाट स्वतन्त्र रुपमा परिक्रमा गर्ने..
ललितपुर, २ असार । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल जापानी अन्तरीक्ष अन्वेषण संस्था (जाक्सा) ले सोमबार जापानमा आयोजना गरेको नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले गर्ने पृथ्वी परिक्रमाको प्रत्यक्ष ‘भिडियो कन्फरेन्स’मा सहभागी हुनुभएको छ । शिक्षा मन्त्रीका साथमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा– प्रतिष्ठान (नाष्ट) का उपकुलपति डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ पनि सो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले..
काठमाडौँ,१ असार पब्जी मोबाइल गेम विश्वको सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने अनलाइन गेम बनेको छ । पब्जीले ४० करोडभन्दा बढी पटक आफ्नो गेम डाउनलोड भएको बताएको छ । त्यस्तै चीन बाहिर मात्रै पाँच करोड दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् । एक रिपोर्टका अनुसार, पब्जी गेमले गएको महिना १४६ मिलियन डलर कमाइ गरेको छ, जुन अरु अनलाइन मोबाइल गेमको कमाइभन्दा धेरै बढी हो । गेमको धेरैजसो..
काठमाडौँ, १ असार । इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामाग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ । धेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुने समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी..
एजेन्सी, ३१ जेठ । अब स्मार्टफोनको प्रयोगले झुटो बोलेको सजिलैसँग थाहा पुन सकिने छ । स्मार्टफोनका लागि एउटा यस्तो एप डिजाइन गरिएको छ जसले मानिसहरुको झुट समात्न सकिनेछ । यसले वास्तवमा नै त्यस्तो भाव पैदा गर्न मद्दत गर्दछ जसले गर्दा कसैले पनि झुटो बोलेको थाहा पाउन सकिने कुराको भान हुन्छ । ‘लाई डिटेक्टर’ नामको यो एप गुुगल प्ले बाट सित्तैमा डाउनलोड गर्न सकिनेछ..
काठमाडौँ, ३० जेठ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’बारेको विवाद साम्य पार्न आज विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्नुभएको छ । सो विधेयकका कतिपय बुँदामा नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकार भएका पक्षले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले सम्पादकसँग परामर्श गरेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय..
काठमाडौँ, २८ जेठ । पछिल्लो अध्ययनले नेपालका हिमनदीको पिंधको तापक्रम माइनस १० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीसम्म छ भन्ने सोचाइलाई गलत सावित गरिदिएको छ । नेपालका हिमनदीमा पहिलोपटक गरिएको ‘हट वाटर ड्रिलिङ’ अध्ययनले हिमनदीको पिंधको तापक्रम माइनस एकदेखि माइनस तीन डिग्री सेल्सियस मात्र रहेको प्रमाणित भएको छ । हिमनदीमा हालसम्म गरिएका अध्ययनमा हिमनदीको पिंधको तापक्रम माइनस १० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीसम्म हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित..
मुम्बई २८ जेठ । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनको ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ । सोमबार मध्य रातमा ह्याक गरेर उनको अकाउन्टमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको तस्बिर राखिएको थियो । ह्याकरले ३ वटा ट्विट पनि गरेका थिए । जसमध्ये एक ट्विटमा ‘लभ पाकिस्तान’ लेखिएको थियो । बीबीसी हिन्दीका अनुसार टर्कीको पाकिस्तान समर्थक समूह अयालडिजको समूहले बच्चनको अकाउन्ट ह्याक गरेको हो । यसको जिम्मेवारी त्यस..
काठमाडौँ, २७ जेठ । लामो समयदेखि चीन र नेपाल बीच भइरहेको व्यापार व्यवसायमा टेवा पुर्याउनुका साथै दुईपक्षीय भ्वाइस कल सेवा सहज बनाउने उदेश्यले कम्पनीले सुपथ मूल्यमा कल सेवा लागू गरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमको सिमबाट चीनमा तीन रुपैयाँ तीन पैसामै कल गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यस अफरबाट ग्राहकले अघिपछिको तुलनामा २०.८९ प्रतिशत कम शूल्कमा कल गर्न सक्नेछन् । कम्पनीले उक्त..
ललितपुर, २७ जेठ । नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ ले असार २ गतेदेखि पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयले नेपालका लागि पहिलो पटक गत वैशाख ४ गते उक्त भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महीनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भूउपग्रहले असार २ देखि पृथ्वीको कक्षमा आई परिक्रमा गर्न लागेको हो । नास्टमा ग्राउण्ड..
सङ्खुवासभा, २४ जेठ मादी नगरपालिकामा १३ वर्षपछि लैण्डलाइन फोन जोडिएको छ । मर्मत नहुँदा उक्त सेवा २०६२ सालदेखि बन्द थियो । मादीको ओखरबोटे बजारमा ०२९–४२४००१ नम्बरबाट उक्त सेवा शुरु गरिएको हो । लैण्डलाइन फोनको सुविधा नहुँदा यहाँका बासिन्दा इन्टरनेटलगायत सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । मादी होटलका सञ्चालक नवीन दाहाल लैण्डलाइन फोन जडानपछि एडीएसएलको सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट चलाउन पाइएको बताउनुहुन्छ । लैण्डलाइन सेवा..
खोटाङ, २४ जेठ । माटोको उर्वराशक्तिअनुसार व्यावसायिक खेती लगाउने उद्देश्यले जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा माटो परीक्षण शुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्रका हरेक ठाउँका माटोको अवस्था र उर्वराशक्तिबारे जानकारी लिएर सोहीअनुसारको खेती गर्ने उद्देश्यले माटो परीक्षण शुरु गरिएको हो । गाउँपालिकाभित्रका छ वटै वडाका माटोको प्रकृति पत्ता लगाएर सो स्थानमा उत्पादन हुने उपयुक्त कृषि बाली सिफारिशका लागि यही जेठ १९ गतेदेखि किटबक्स विधि प्रयोग गरेर..
काठमाडौँ, २३ जेठ मेगा नेशनल कलेजले ‘व्यवस्थापन र प्रविधिको सम्भावना र चुनौती’ विषयमा शनिबारदेखि दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ । विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका प्राचार्य डा घनश्यामप्रसाद शाहले सम्मेलनबाट विद्यार्थी र शिक्षकको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सम्मेलनमा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग जोडिएका विलय तथा प्राप्ति, सांस्कृतिक विविधिकरण, कामदारको विविधिकरण,..
काठमाडौँ, २३ जेठ आपसी ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदानका लागि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र अन्य मुलुकका युवा वैज्ञानिकले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (नेटवर्क) गठन गर्ने भएका छन् । उनीहरुले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न वैज्ञानिक क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्ने उद्देश्यले यहाँ आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा उक्त सञ्जाल गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको समन्वय र प्रदेश..
काठमाडौँ, २२ जेठ उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरणका साथै जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपलगायत महत्वपूर्ण विषयमा अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिकका अनुभव साटासाट गर्ने उद्देश्यले आजदेखि यहाँ अन्तरराष्ट्रिय (सार्क) युवा वैज्ञानिक सम्मेलन शुरु गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको समन्वय र प्रदेश नं ३ सरकार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सम्मेलनको आज पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का..
ताप्लेजुङ, २२ जेठ मालपोत कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अनलाइन सेवा शुरु गरिएको छ । नवनिर्मित भवनमा मङ्गलवार कार्यालय स्थानान्तरण भएसँगै उक्त सेवा सञ्चालन गरिएको हो । ताप्लेजुङ यस्तो किसिमको सेवा प्रदान गर्ने ६२औँ मालपोत कार्यालय भएको छ । देशभरका १३१ वटा मालपोत कार्यालयमा यो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो । महानिर्देशक दुवाडीका..
काठमाडौं, २१ जेठ साउनदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरुले २० प्रतिशत मूल्य बढाउने घोषणा गरेका छन् । गत वर्ष बढेको मूल्य घटाउने क्रममा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले गत वर्ष थप १३ प्रतिशत दूसञ्चार सेवा शुल्क लगाएको थियो । त्यसआधारमा व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएका थिए तर, सरकारले विभिन्न सहुलियत दिने आवश्वासन दिएपछि मूल्य बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिए । त्यसबेला सञ्चारमन्त्री गोकुल..
काठमाडौँ, २० जेठ २४ वर्ष अगाडि नै माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले अहिलेको गलत समाचार र सामाजिक स्ट्रिमिङ सेवाको भविष्यवाणी गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा अहिले विभिन्न किसिमका समाचारको बाढी आउने गरेको छ । तर, धेरैजसो समाचार गलत हुने गरेका छन् । त्यसका साथै युट्युब–नेटफ्लिक्समा पछिल्लो फिल्म तथा भिडियो सजिलै हेर्न सकिन्छ । सन् १९९५ मा गेट्सले जीक्यु म्यागाजिनको जर्नलिस्ट टेरी प्रैशेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा..
काठमाडौं, २० जेठ । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले देशकै वृहद् चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा फोरजी/लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटीई) नेटवर्क थप विस्तार गरी देशका १ हजारभन्दा बढी स्थानहरूमा फोरजी सेवा पुर्‍याएको छ । एनसेलले आइतवार आफ्नो फोरजी सेवा देशका सातै प्रदेशका १ हजारभन्दा बढी स्थानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको पहुँचमा पुगेकोे घोषणा गरेको छ । अब प्राय: सबै शहरहरू र शहरी क्षेत्र भन्दाबाहिर रहेका ग्राहकहरूले पनि..
काठमाडौँ, १९ जेठ अमेरिकी नयाँ नियम अनुसार अब अमेरिका जानको लागि आफ्नो समाजिक सञ्जालको विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले भिसा आवेदकका लागि विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै सामाजिक सञ्जालका गतिविधिहरु आवेदनका क्रममा पेश गर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरेको हो । भिसा निवेदन दिने व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा रहेको प्रयोगकर्ता नाम, पाँच वर्ष अवधिका ईमेल आइडी र फोन नम्बरहरु पेश..
काठमाडौँ, १९ वैशाख नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा आजदेखि प्रिपेड अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । प्रारम्भमा यो सेवा भारत र चीनमा लागू हुने प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिए । अब नेपाल टेलिकमका जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ता चीन वा भारत गएको समयमा आफ्नै मोबाइलबाट नेपालमा कल गर्न सक्ने छन् । नेपालबाट आएको कल उठाउन र एसएमएस पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्ने..
काठमाडौं, १६ जेठ । अहिले स्मार्टफोट बोक्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ, कतिपयले यी फोनसेटहरुबाट लिन सकिने अधिकाँश सेवाहरु लिन जानी रहेको पाईदैन । हामीले आज जानकारी दिन खोजेको विषय मोबाईलबाट नै डिएसएलआर क्यामराले खिच्ने जस्तै उत्कृष्ट क्यावालीटीको फोटो मोबाईलबाट पनि खिच्न सकिन्न भन्ने बारे हो । डिएसएलआर क्यामरा सबै सँग नहुन पनि सक्छ त्यस्तो अवस्थामा स्मार्टफोनबाट फोटोग्राफी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि गूगल..
टोकियो, १६ जेठ । जापानको नारिता विमानस्थलमा सुरक्षाका लागि रोबोटको प्रयोग गरिने भएको छ । जापानको चिबा प्रिफेक्चरको छिमेकमा रहेको नारिता विमानस्थल मध्य टोकियोमा पर्दछ । यस विमानस्थलमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि रोबोटको प्रयोग गरिने भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । यस प्रयोजनका लागि चार ओटा रोबोट परिचालन गरिने छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार ती रोबोट १.२० मीटर उचाईका छन् । ती रोबोटमा ३६० डिग्रीको हिसाबमा..
नान्जिङ, १५ जेठ । चीनको जियाङ्सु प्रान्तको हुइनान नगरबाट प्रहरीले टेलिकम तथा अनलाइन ठगीमा संलग्न शंकास्पद ३१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यी व्यक्तिले करिब एक लाख ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ठगी गरेको प्रहरीको आशंका छ । गत जुलाईमा एक जना लिउ नाम बताउने व्यक्तिले स्थानीय प्रहरी समक्ष अनलाइनमा भेटिएकी एक किशोरीमार्फत आफू ठगिएको उजूरी गरेका थिए । लिउले ती किशोरीसँग १२ दिनसम्म अनलाइन..
काठमाडौं, १५ जेठ चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनासम्म नेपालको ९० प्रतिशत भूभागमा मोबाइल सेवाको पहुँच पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा देशभरका ७७ जिल्लामा नै मोबाइल सुविधा पुगेको उल्लेख गरेको हो । सर्वेक्षणअनुसार आव २०७५/७६ को माघसम्म दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको संख्या ४ करोड ४ लाख ५७ हजार ४ सय ३१ पुगेका छन् । सो अवधिमा टेलिफोन घनत्व १३७ दशमलव १७..
यी हुन् विश्वका ५ उत्कृष्ट स्मार्टफोन, के-के छन् विशेषता ?
काठमाडौं, १४ जेठ विश्वभर स्मार्टफोनका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ विशेषता भएका मोडलहरु सार्वजनिक हुँदै जाँदा नेपालमा पनि स्मार्टफोनको व्यापार बढ्दो मात्रामा रहेको छ । अहिले नेपाली बजारमा करिब १० हजार रुपैयाँबाट २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने स्माटफोनहरु उपलब्ध छन् । उपभोक्ताले आफ्नो बजेट र फिचरका आधारमा स्मार्टफोन खरिद गरिरहेका छन् । विगतमा स्मार्टफोनको बजारमा सामसुङ र एप्पलको मात्रै प्रतिस्पर्धा..
सिडी, डिभिडी र मोबाइलका कारण सिनेमाघर बन्द, करोडौँ रुपैयाँ घाटा
सिरहा, १२ जेठ । सिडी, डिभिडी र मोबाइलमै चलचित्र हेर्न पाइने सुविधाका कारण सिरहामा सिनेमा घर बन्द हुन थालेका छन् । ग्रामीण भेगसम्म सिडी, डिभिडी र मोबाइलबाटै चलचित्रलगायत मनोरञ्जनका सामग्री हेर्न सकिने भएकाले एक दशकयता सप्तरीका प्रायःसबै सिनेमाघर बन्द भएका हुन् । विगत एकदशक अघिसम्म जिल्लामा एक दर्जन सिनेमा घर सञ्चालनमा रहे पनि अहिले जेनतेन एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । लहानमा सञ्चालित..
Results 781: You are at page 12 of 27